wandile namuhla futhi isifo njalo Kwasebusheni kuyinto endometriosis zangasese. Nengwenya iningi nemiphumela yako, futhi ngezinye izikhathi uphawu kuphela nenzalo.
Kungani kwenzeka isifo? akucaci ukuthi ososayensi, kodwa kulesi sici kukhona inombolo yemibono. Ngakho, uh ndometrioz. izizathu:
izinkinga zesimiso sokuzivikela somzimba,
ukungalingani hormone (hyperestrogenia);
ekubunjweni menses e amashubhu futhi ingaphakathi peritoneal.
Lezi ezizathwini ziqinisekiswa ucwaningo. Nokho, ezinye izazi zikholelwa ukuthi izimbangela ziyiqiniso ibingakazeki.
Uphawu oyinhloko endometriosis - ubuhlungu, okuyinto ziyahlukahluka ngegalelo lazo. Ezigabeni zokuqala izifo, kungenzeka zingatholakali. Amandla yobuhlungu endometriosis incike ezifweni ngabanye kanye akusho ngaso sonke isikhathi kubonise kobukhulu inqubo. Nakuba ezinye iziguli zizizwe ukungakhululeki kuphela, kuyilapho abanye abakwazi ukusebenza.
I engavamile we izinhlungu ezihambisana endometriosis siwukuthi bangamalungu cyclical. Okungukuthi avele noma zimbi esesikhathini. Ngu ubunjalo ubuhlungu udokotela angase asikisele inqubo kwasendaweni.
Ngaphezu kwalokho, i-endometriosis made, esindayo, nezikhathi ezibuhlungu. Lesi sifo libhekene ngaphambi nangemva nyangazonke zokubona. Ezigabeni kamuva ingase ukopha. Ngenxa esindayo igazi ukulahleka e abesifazane ngokuvamile igazi.
Ngesigamu amacala ukungazali esihambisana endometriosis zangasese. It kuvela ngenxa ukuvuvukala kule amashubhu, nge-ovulation iziyaluyalu kanye zokugula endometrial. Ngaphezu kwalokho, kugula kwandisa macrophage prostagladinov ukuthi esilimaza wenzalo.
Kulesi izicubu isifo afana endometrium kuqala ukukhula ezindaweni ezingalindelekile. Ngakho, lapho i-endometriosis yangaphakathi kwenzeka myometrium, futhi yangaphandle - e ezikhiqiza amaqanda, amashubhu, sangasese, kanye yonke imigwamanda kanye wesibeletho.
amaseli Endometrial ngaphansi kwethonya hormone othola izinguquko eyindilinga futhi wasenqaba esesikhathini like lesizalo mucosa. Lokhu kuholela ukopha, ukuvuvukala, edema, ukuphazamiseka ukusebenza isitho ethintekile, kanye kumiswa ukuvuvukala.
endometriosis zangasese kutholakala ukuthi uphethwe yini ngesisekelo nesineke izikhalo, luhlolo, imisindo ephansi, hysteroscopy, gisterosalpigografii futhi laparoscopy. In the ukungabikho izimpawu kungenzeka ngezikhathi ngesikhathi ukuvakashelwa oluya udokotela wezifo zabesifazane noma ukusebenza kwesinye isenzakalo.
Ultrasound ungakwazi ukuxilonga adenomyosis, ukuvuvukala endometrial futhi izinhlumba. Phakathi hysteroscopy osmotrivaetsya kwesibeletho, kuyasiza ukuthola i-endometriosis yangaphakathi nezinye pathologies eziningana.
Hysterosalpingography ikakhulukazi esetshenziswa ukuqinisekisa patency kuzo ngemibhobho fallopian. Phakathi kwesibeletho wakhe ukwethula umphenyi okhethekile wenze-X-ray. Nokho, lolu cwaningo kusiza ukuhlonza kanye lesizalo zokugula, kuhlanganise adenomyosis.
Ukuze sitholakele endometriosis, wesibeletho lwesitho sangasese sowesifazane wokuhlola kanye colposcopy okwanele. Ngalesi, udokotela elihlola ngaphansi ngesibonakhulu, ezahlukene staining izixazululo.
Indlela olunembile kakhulu ukuthola i-endometriosis wesibeletho kanye amapayipi kuyinto laparoscopy. Lokhu ukuthola ukutadisha pathologies ingena ukuhlinzwa. Ngesikhathi wasusa endometriosis. Ukuze ufinyelele ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu kuphela ukusikeka ezimbalwa, kuhlanganise kudivayisi optical, ikuvumela ukuba siqaphele intuthuko ukusebenza.
Ngaphandle amasu kuhlinzwa ngoba ukwelapha i-endometriosis esetshenziswa hormonotherapy. Amalungiselelo ukhetha udokotela, ikhumbula isigaba ohlelweni, yobudala kanye izinhlelo lesiguli.
Ngakho, i-endometriosis zangasese - ukuphazamiseka ezivamile ngesigamu Imiphumela amacala e ukungazali kanye ubuhlungu. Uma usheshe uqale ukwelashwa futhi, cishe ukubuyisela okuzala.
Leukopenia: Izimbangela, ukuxilongwa kanye nemiphumela
Scrapie: izimpawu, ukwelashwa, izimbangela
Jelly. Calorie dessert. zokupheka
ULance Armstrong - hero international
Amabhishi adumile aseNovosibirsk: "Boomerang", "Remix", "Mayak", "Locomotive"
Victoria Agapov: ebuntwaneni, impumelelo ekuseni, empilweni yakho
Izidlo of duck zasendle. Amnandi Futhi okunempilo
Esiko Temple of Horus at Edfu - isikhumbuzo abathwele impucuko yeGibhithe lasendulo